Imigomo Nemibandela Yokuhweba Forex | Ukuhweba Okulula Kokuhweba Nge-FXCC
Imigomo Nemibandela ye-FXCC
THOLA UKUFUNDA LOKWENZA IMITHETHO NEMITHETHO.
UKUFINYELELA LE WEBSITE UYAVUMELANA UKUTHI UFUNYWE NGEMITHETHO NEMITHETHO OKUFANELE UKUTHETHE KWE SITE SITE KANYE NEMIBUZO NGOKWENZA. I-FXCC IQONDISA Ilungelo lokushintsha lezi zindlela nemigomo nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kweSaziso. NAMAKHONA UHLULEKILE UKUHLOLA OKUPHAKATHI IZIMISO NEMITHETHO. UKUSETSHENZISWA KWE SITE SITE NGOKUNYE IZINTSHINTSHO EZIKHONA UKUQALA UKUTHETHA KWAKHO KWEZINTSHA ZOKUPHAKHA. UKUBA UNGAKHULU NEMITHETHO NEMITHETHO, THOLA UKUTHOLA LEWEBSITE.
I-FXCC inayo futhi igcina le sayithi. Asikho isenzo sokulanda noma ukukopisha okuvela kule sayithi kuzodlulisela isihloko kunoma yikuphi isofthiwe noma impahla evela kule sayithi kuya kuwe. Noma yini oyithumela kule sayithi iba yindawo ye-FXCC, ingasetshenziswa yi-FXCC nganoma iyiphi injongo evumelekile, futhi iphinde ibe ngaphansi kokudalulwa njengoba kubhekwa kufanelekile yi-FXCC, kuhlanganise nanoma yiliphi igunya elingokomthetho noma elilawulayo lapho i-FXCC ihambisana nayo. I-FXCC igcina wonke amalungelo ngokuphathelene nobunikazi be-copyright nobunikazi bokuthengisa konke okukulesi sayithi, futhi izophoqelela lawo malungelo ngokugcwele komthetho.
Izinto eziqukethwe kuwebhusayithi, kufaka phakathi kodwa ezingapheli kukho konke ukuklama, umbhalo, amavidiyo, ukurekhoda komsindo, nezithombe, zinomnikazi, ngaphandle kokunye okushiwo ngokucacile, nge-FXCC. Ngaphandle kokuthi kuboniswe ngenye indlela lapha, ngeke kukopishwe, kuhanjiswe, kuboniswe, kwenziwa, kusatshalaliswe (isinxephezelo noma kungenjalo), ilayisensi, iguquliwe, ifakwe, igcinwe ukusetshenziswa okulandelayo, noma isetshenziswe ngokugcwele noma ingxenye nganoma iyiphi indlela ngaphandle Imvume ebhaliwe ngaphambilini ye-FXCC.
Leli sayithi nolwazi, amathuluzi kanye nokuqukethwe okukuwo akuqondiswa, noma okuhloswe ukuba kusatshenziswe noma kusetshenziswe, noma yimuphi umuntu noma inhlangano eyisakhamuzi noma ohlala kuyo noma ekhona kunoma yikuphi ukuphatha lapho ukusatshalaliswa, ukushicilelwa, ukutholakala noma ukusetshenziswa kuzobe kungqubuzana nomthetho noma umthethonqubo noma okungaxhomeke ku-FXCC noma kubambisene nabo kunoma yiziphi izimfuneko zokubhalisa noma zokulayisense ngaphakathi kwaleso sikhundla.
UKUKHULULELA KWAMARARANTI NOKUKHALWA KWEZINDLELA
Ulwazi olukulesi sayithi luhlinzekwa "Njengoba kunjalo". I-FXCC ayifuni ukucacisa okushiwo yizinto ezihlinzekwe lapha, ngokucacile noma ngokucacile, nganoma iyiphi inhloso ethile futhi ilahla ngokucacile noma yikuphi ukuqinisekiswa kokuthengiswa noma ukufaneleka komgomo othile. I-FXCC ngeke ibe nesibopho sokulahlekelwa noma ukulimala okungase kubangelwe ekukhunjweni ngamalungu wesithathu kwanoma yiluphi ulwazi olunikezwa kuwe ngaleli sayithi. Nakuba ulwazi olunikezwa kuwe kule sayithi litholakala noma luhlanganiswa emithonjeni esiyakholelwa ukuthi iyathembekile, i-FXCC ayikwazi futhi ayiqinisekisi ngokunemba, ukuqinisekisa, ukugcina isikhathi noma ukuphelela kwanoma yiluphi ulwazi noma idatha eyenziwe kuwe nganoma iyiphi inhloso ethile. Abe-FXCC, nanoma yikuphi abathintekayo bayo, abaqondisi, izikhulu noma abasebenzi, noma omunye umdayisi wesithathu uyobe enecala noma enomthwalo wemfanelo nganoma yiluphi uhlobo lokulahleka noma umonakalo owenza uma kwenzeka noma yikuphi ukuhluleka noma ukuphazanyiswa kwalesi siza, noma okubangelwa isenzo noma ukushiywa kwanoma yiliphi elinye iqembu elihilelekile ekwenzeni le sayithi noma idatha equkethwe kuyo, noma kunoma iyiphi enye imbangela ephathelene nokufinyelela kwakho, ukungakwazi ukufinyelela, noma ukusebenzisa isayithi noma lezi zinto, noma ngabe noma hhayi izimo ezenza leyo nto ingase ibe ngaphansi kokulawulwa kwe-FXCC noma yimuphi umthengisi ohlinzeka nge-software noma ukwesekwa kwezinsizakalo.
Ngaphansi kwanoma yiziphi izimo, i-FXCC izobekwa icala nganoma yikuphi ukulimala okunomphumela, okungahle kwenzeke, okukhethekile, okujeziswa noma okuyisibonelo okuvela kunoma yikuphi ukusetshenziswa noma ukungakwazi ukusebenzisa leli sayithi noma ingxenye yalo, kungakhathaliseki ukuthi i-FXCC iye yafundiswa kanjani amathuba okulimala okwenzekayo futhi kungakhathaliseki uhlobo lwesenzo, kungakhathaliseki ukuthi ku-Contract, Tort (kufaka ukunganakwa), Ukuzibophezela Okuqinile, noma okunye.
Ukwaziswa okuqukethwe kule sayithi kuhloswe ngenjongo yolwazi kuphela. Ngakho-ke akufanele kuthathwe njengokunikezwa noma ukucela kunoma yimuphi umuntu kunoma yikuphi ukugunyazwa okunikezwayo noma ukucela okungafanelekile noma kunoma yimuphi umuntu okungeke kube mthethweni ukwenza leso sipho noma ukucela, noma kuthathwa njengencomo ukuze ukuthenga, ukuthengisa noma okunye ukubhekana nanoma yikuphi ukutshalwa kwezimali okukhethekile. Ukwaziswa kakhulu ukuthi uthole ukutshalwa kwezimali ozimele, ezezimali, ezomthetho nezentela ngaphambi kokuqhubeka nanoma yikuphi ukutshalwa kwezimali. Akukho lutho kulesi sayithi okufanele lufundwe noma lubekwe ngokuthi lube iseluleko sezimali zokutshala izimali engxenyeni ye-FXCC, noma yiyiphi yababambisene nabo, abaqondisi, izikhulu noma abasebenzi.
Uhlobo lokutshalwa kwezimali ku-Financial Instruments lukuthi akuzona zonke izitsha zezimali ezifanele wonke umuntu ngaphandle kokuthi:
bayakwazi ezindabeni zokutshala izimali,
bayakwazi ukuthwala ingozi yomnotho yokutshala izimali,
baqonde ingozi ehilelekile; futhi
bakholelwa ukuthi utshalomali kufanelekile ngenhloso ethile yokutshalwa kwezimali kanye nezidingo zezimali.
Uma kunoma yikuphi ukutshalwa kwezimali okungezona ezobuchwepheshe okutshala imali ku-Instruments zezezimali, kunconywa ukuthi kuphela ingxenye yemali esetshenziselwa ukutshala izimali isikhathi eside kumele isetshenziswe.
Kunconywa futhi ukuthi bonke abatshalizimali kumele bafune iseluleko kumeluleki wezokutshalwa kwezimali ngaphambi kokwenza noma yikuphi ukutshalwa kwezimali ku-Financial Instruments.
IXHUMANA NAMANYE AMASITSI
Izixhumanisi kumawebhusayithi angewona ama-FXCC anikezwa kuphela njengezikhombisi-ndlela kolwazi ngezihloko ezingase zisebenzise kubasebenzisi bamawebhusayithi e-FXCC, futhi i-FXCC ayinakho ukulawula okuqukethwe kumawebhusayithi angewona ama-FXCC. Uma ukhetha ukuxhumanisa kwiWebhu engalawulwa yiFXCC, i-FXCC ayikwenzi i-warranties, noma iveza noma ifakiwe, ngokuphathelene nokuqukethwe kwaleso sayithi, kufaka phakathi ukunemba, ukuphelela, ukwethenjwa, noma ukufaneleka kwayo nganoma iyiphi inhloso ethile, futhi i-FXCC ayiqinisekisi ukuthi isayithi elinjalo noma okuqukethwe akukhululekile kunoma yiziphi izimangalo ze-copyright, uphawu lokuhweba noma okunye ukwephulwa kwamalungelo abantu abathintekayo noma ukuthi isayithi noma okuqukethwe akunalo amagciwane noma omunye umonakalo. I-FXCC ayiqinisekisi ubuqiniso bemibhalo e-Intanethi. Izixhumanisi kumasayithi angewona amaFXCC awasho ukuthi yikuphi ukugunyazwa noma umthwalo wemibono ngemibono, imibono, imikhiqizo, ulwazi, noma izinsizakalo ezinikezwa kumasayithi anjalo, nanoma yisiphi isethulo mayelana nokuqukethwe kumasayithi anjalo.
Uma uxhumana ne-FXCC nge-imeyili, kufanele uqaphele ukuthi ukuphepha kwe-imeyli e-imeyli akuqinisekisiwe. Ngokuthumela imiyalezo ye-e-mail ebucayi noma eyimfihlo engabhalwanga ngekhodi, wamukela izingozi zokungaqiniseki okunjalo nokuntuleka kwemfihlo phezu kwe-Inthanethi. I-intanethi ayikho i-100% iphephile futhi omunye umuntu angakwazi ukungena futhi afunde imininingwane yakho.
Noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu osihlinzeka ngalo luzophathwa njengeyimfihlo futhi lukwabelwana kuphela eNkampanini, abambisene nabo nabalingani balo bebhizinisi futhi ngeke ludalulwe kunoma yimuphi umuntu wesithathu ngaphandle kwanoma yiziphi izinqubo zokulawula noma zomthetho. Amasistimu wokulandelela amawebhusayithi angase aqoqe idatha ebonisa amakhasi oye wawafinyelela, ukuthi uthola kanjani leli sayithi, imvamisa yokuvakashelwa njalo njalo. Ulwazi esilutholayo lusetshenziselwa ukuthuthukisa okuqukethwe kwewebhu lethu futhi lungasetshenziswa ngathi ukuxhumana nawe, nganoma yiziphi izindlela ezifanele, nokukunikeza noma yiluphi ulwazi olukholelwa ukuthi lungasiza kuwe.